Ilay hotely iraisam-pirenena Brian Connelly hitarika an'i Marco Polo Plaza Cebu
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Ilay hotely iraisam-pirenena Brian Connelly hitarika an'i Marco Polo Plaza Cebu
Jona 29, 2017
Ny Wharf Hotels dia nanendry ny hotely iraisam-pirenena Brian Connelly ho Tale Jeneralin'ny trano fandraisam-bahiny an-tanàn-dehibe, Marco Polo Plaza Cebu.
Connelly dia nitondra traikefa nanan-karena tamin'ny anjara andraikitra samihafa nandritra ny 38 taona niaraka tamin'ny hotely sy hotely malaza any Asia Pacific, Middle East ary Etazonia, izay nahatonga azy ho mpandimby tsara indrindra ny mari-pitsarana fandraisana an'i Cebu izay mipetraka eo an-tampon'ny havoanan'ny tanànan'i Cebu.
Nahazo diplaoma amin'ny mari-pahaizana licence amin'ny Hotel and Restaurant Administration avy any amin'ny State University Oklahoma, Connelly no nitana ny toeran'ny Tale Jeneraly ho an'ny Angsana Laguna Phuket & Angsana Villa Resort any Thailand. Tany am-piandohan'ny asany, Connelly dia nitana andraikitra ambony amin'ny fitantanana manerantany miaraka amin'ny Hilton Asia Pacific sy Middle East, Oakwood Asia Pacific, Fairmont Hotels Middle East ary Intercontinental Hotels any Thailand sy China.
“Mahafaly ny eto amin'ny nosy kanto Cebu. Voninahitra ho ahy ny manana fotoana mety ho Tale Jeneralin'ny trano fandraisam-bahiny mahafinaritra, Marco Polo Plaza. Manantena aho ny hanohy ny fahombiazan'ny trano fandraisam-bahiny sy hiara-miasa amin'ny ekipa hampitombo sy hanatsara ny asa. Marco Polo Hotels dia manana laza mahatalanjona any Filipina ary manantena ny fanatsarana bebe kokoa ny marika izahay, ”hoy i Connelly momba ny toerany vaovao.
Ny tanjon'i Connelly dia hisy ny fiantohana ny trano fandraisam-bahiny amin'ny alàlan'ny famindrana tombony manerana ny tsena rehetra ary hananganana ny fisian'ny marika any Cebu sy ireo tsenan'ny mpamahana azy.
“Faly izahay mandray an'i Brian amin'ny fianakavianay Marco Polo Hotels izay nahazo loka. Ny fahaizan'i Brian mandray vahiny aziatika dia voaravaka amin'ny masony voromahery amin'ny fitantanana orinasa mahasoa sy mitarika fitarihana fatratra dia hanampy amin'ny fitarihana ny fananana amin'ny fandaharan'asa fanatsarana mitohy ary hanamafisana ny toerana misy azy ao an-tanànan'i Cebu " Operations ho an'ny hotely Wharf.